Don Draper ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဉာဏ်ပညာ၏ကိုးကားချက်များ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 13, 2014 ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 13, 2014 Douglas Karr
ငါစာရေးဆရာများ၏နေသောမဖတ်ဘူး အရူးယောက်ျားသို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသော ၀ န်ထမ်းများ၌၎င်းတို့တွင်လူအချို့ရှိသည်။ သူတို့ဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတွေကိုစုဆောင်းပြီး Jon Hamm ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့အကျင့်စရိုက်အတွက်သူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ရမယ်ထင်တယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအနည်းငယ်ပါ ဒွန် Draper ကိုးကား:
သင်ထုတ်ကုန်များ မင်းတစ်ခုခုခံစားနေရတယ် ဒါရောင်းပါတယ် သူတို့မဟုတ်ပါ။ လိင်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့လုပ်သမျှကိုသူတို့မလုပ်နိုင်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုမုန်းတယ်။
ကြော်ငြာသည်ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ တဖန်သင်တို့ပျော်ရွှင်မှုကိုကဘာလဲဆိုတာသိ? ပျော်ရွှင်မှုသည်ကားသစ်တစ်မျိုး၏အနံ့ဖြစ်သည်။ ကြောက်ရွံ့မှုကနေလွတ်မြောက်မှုပါ။ လမ်းဘေးရှိကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်သည်သင်လုပ်သမျှအားလုံးအဆင်ပြေကြောင်းအာမခံချက်ကိုအော်ဟစ်သည်။ မင်းအဆင်ပြေပါတယ်
ဒီစိတ်ကူးယဉ်အချက်အလက် စျေးကွက်ဥာဏ်ပညာ၏ဒွန် Draper ခဏ နေ မီဒီယာအသစ် Glow.
Tags: Don draperdraper ကိုးကား Donjon hammဂျွန် hamm ကိုးကားအရူးအရူးယောက်ျားကိုးကား